Tommy Hilfiger နှင့်ယခုဖြစ်ပျက်နေသော 'it men' များနှင့်အတူပါဝင်ခြင်း | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ကားလို့စ် Rivera | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့, သဘောထားတွေ
နှင့်အတူတိုက်ဆိုင် London Collection: အမျိုးသားများအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Tommy Hilfiger ကအတူတကွ၏အလွန်ကောင်းသောကိုယ်စားပြုမှုကိုဆောင်ခဲ့သောပါတီတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ် ကယောက်ျား ယခုအချိန်တွင် GQ မဂ္ဂဇင်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်ရှင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်စွန်ပလွံပင်၏နှလုံးသားများလမ်းလျှောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
GQ မဂ္ဂဇင်း၏ဒါရိုက်တာ၊ အဆိုတော်နှင့်ဂီတပညာရှင် Dougie Poynter နှင့်မော်ဒယ်များ Oliver Cheshire၊ David Gandy နှင့်Andrés Velencoso တို့ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မတ်မတ် ဒီသီးသန့်ဖြစ်ရပ်မှ the ည့်သည်များ၏။
အခမ်းအနားကထိုက်တန်ပါတယ်။ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အများဆုံး epicurean စတိုင်ထုတ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ များစွာသောသူတို့သည်ဘဇားရားနှင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်ဘောင်းဘီများကိုပေါင်းစပ်ရန်တီးခတ်ခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းတို့အနက်မှအများစုသည်သူတို့၏ဝတ်စုံကိုကြယ်ပွင့်အ ၀ တ်အစားအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာလေဖြစ်သည် စက်ချုပ် အမျိုးသားဖက်ရှင်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဒီပါတီပွဲမှာအောင်ပွဲခံခဲ့တယ် ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ် များအတွက်အဆိုပြုချက်မှသီးသန့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား အမျိုးသားအဝတ်အစား ပါရီ၊ မီလန်တို့နှင့်အတူကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိလူတို့၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုင်ရာအဆင့်သုံးဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ငါ့အကြား ရူပ အကြိုက်ဆုံးများ, ငါဂန္အလောင်းအစားနှင့်အတူကပ်ပေမယ့်ပိုပြီးထိတွေ့နှင့်အတူ ကြိုတင်မဲ Johannes Huebl ဖွငျ့ဖွစျသညျ။ စီးပွားရေးသမားနှင့်မော်ဒယ်လ်ကရွေးချယ်ခဲ့သည် ပိုးထိုးပြီးလည်စည်းနှင့်ပေါင်းစပ် anthracite bluish မီးခိုးရောင်အတွက် windowed ဝတ်စုံကို.
လူစုလူဝေးထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂန္တ ၀ င်ဘဲလေးအက Eric Eric ဟာ ၀ မ်းသာစွာနဲ့ Tommy tonal ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားတဲ့အဖွဲ့ပါ။ လျှပ်စစ်အပြာရောင်နှစ်ဆရင်သားကင်ဆာ၊ အနီရောင်ဘောင်းဘီနှင့်သင်တန်းပို့ချသူများ.
အခြား မတ်မတ် အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အင်္ဂလိပ်စူပါမင်းကြီးဒေးဗစ်ဂန်ဒီနီကထူးကဲကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် သုံးအပိုင်းအစဝတ်စုံကို ရေတပ် ဟဲလ် finish ကိုနှင့် Two- သေံ checkerboard ရင်ထိုးနှင့်အတူ.
စပိန်မော်ဒယ်လ်နှင့်သရုပ်ဆောင်အန်ဒရေစ်ဗယ်လင်ကိုဆိုကမူသူ၏လည်စည်းကိုအိမ်တွင်ထားခဲ့ပြီးချော့မော့စွာရွေးချယ်ခဲ့သည် ရေတပ်ဝတ်စုံပေါင်းတစ်ထောင်ဒဏ်ချက်ရှပ်အင်္ကျီတစ် ဦး ခြင်းဖြင့်ထိပ်ဆုံး မှန်ပါတယ် ဖြီးလိမ်းပုံ tousled ဆံပင်နှင့်စစ်မှန်တဲ့အတူ လှိုင်သာယာ သူနှင့်အတူသူသည်အစက်အပြောက်ထိမှန်နှင့်မြေထဲပင်လယ်နှင့်ပုလ် key ကို၌ရပ်နေ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Tommy Hilfiger နှင့်ယခုခေတ်တွင် 'it men' များနှင့်အတူပါ ၀ င်ခြင်း
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း - ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အမျိုးအစားများနှင့်မည်သို့ကာကွယ်နိုင်သည်